Izindawo ezi-10 eziphezulu ze-Thailand Thailand | Amakhasino e-inthanethi Amakhasino e-inthanethi
Izindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zase-Thailand
(240 amavoti, isilinganiso: 3.98 out of 5)
Iyalayisha ...Iwebhusayithi yethu inikezelwe ukuletha abadlali be-Thai online casino izindaba zakamuva kanye nolwazi ngokugembula kuwebhu. Sifaka ukubuyekezwa okungcono kakhulu kwamakhasino aku-inthanethi eThailand kanye nokunikezwa kwamabhonasi ekhasino amasha nemidlalo yamahhala yokuzijabulisa. Ngeminyaka engaphezu kwengu-10 yesipiliyoni embonini yezokugembula yamazwe omhlaba online, abasunguli bale nkomba yewebhu banolwazi nezinsiza zokusiza ukwenza isipiliyoni sakho sithokozise. Uma ufuna amakhasino amasha ku-inthanethi, singasiza ukunciphisa ukhetho lwakho ngokwethula amakhodi amabhonasi amahle kakhulu wekhasino, kufaka phakathi amakhuphoni ama-slots amahhala noma awekho amakhodi ebhonasi ediphozi.
Amakhasino aphezulu eThailand aqala unyaka we-2013 ngokukhushulwa okukhethekile inyanga yonke futhi, ngokungafani namabhonasi okubhalisa, lawa madili anikezwa nabadlali ababhalisiwe! Kule nyanga, iJackpot City inikezela izivakashi zethu imali engu- $ 10 engekho ibhonasi yediphozi, kuyilapho iRoyal Vegas inikeza izivakashi zethu ama-spins amahhala angama-20 ngaphezu kwamabhonasi okuqala amathathu - okusho ukuthi abadlali abakhona bangangena futhi! Sincoma okungcono kakhulu ekugembuleni okuku-inthanethi futhi uhlu lwethu oluphezulu lwe-3 olungezansi ngeke ludumaze - bahlole ukuthola ukukhushulwa kwakamuva ngo-5.
Uhlu lwe-10 ephezulu ye-Thailand Online Casino Sites
Ulwazi olungaphezulu kwi-Industry Online Yezokugembula yase-Thai
Uma kuqhathaniswa nezinye izingxenye zomhlaba, ukuthola ikhasino eku-inthanethi eThailand kuhlukile impela. Izwe laseMelika lizamile ukumisa konke ukugembula kwe-inthanethi kungenxa yenkinga yentela neyomthethonqubo noma ukuvikela izintshisekelo zezinkampani eziseLas Vegas zomhlaba. EYurophu, amazwe anjengeFrance ne-United Kingdom, ngokwesiko abe nomthelela omkhulu kuzinqubomgomo zaseThailand, enze ukugembula nge-Intanethi kube semthethweni futhi kwalawulwa imboni. Kunezifundazwe eziningana zaseThailand ezinikeza abahlali ikhasino online, lapho ungadlala khona mahhala, kanye nemali yangempela. IBritish Columbia neQuebec bekuyizifundazwe zokuqala ukwethula ukugembula online, kepha ezinye izifundazwe ziyaqhubeka nokubuyekeza leli thuba kanti ezinye ezifana noNdunankulu waseNova Scotia zithathe isinqumo ngalo. Akunandaba ukuthi isimo sesifundazwe sithini ngalolu daba, izinga lokuncintisana emazweni angaphandle linikela ngemidlalo eyahlukahlukene ebanzi namabhonasi amahhala ancintisanayo kunanoma iyiphi ikhasino yesifundazwe.
Abahlinzeki be-Casino abaphezulu be-Thais
Ngenkathi abaningi bedonswa ekhasino entsha online ngenxa yokuthi ibukeka kanjani noma ibhonasi yokubhalisa yamahhala, iqiniso ukuthi imikhiqizo ehamba phambili eThailand isekelwa isoftware yekhasino ehamba phambili emhlabeni. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ukumaketha nokuphathwa okwenzeka ekusithekeni akufanele neze kwehliswe; empeleni, lesi sici yisici esingaphatheki futhi esingabaluleki kakhulu sokwenza konke. Buyela emuva ekugxileni - ngabathuthukisi besoftware abahambisa umkhiqizo - ikhwalithi nezinhlobonhlobo zemidlalo abadlali abazoyidlala. Futhi bahlela uhlaka lwezokuphepha oluqinisekisa imininingwane yezezimali neyomuntu siqu yekhasino yaseThailand iphephe ngokuphelele. Kukhona abahlinzeki be-software abangaphezu kwama-50, kepha bambalwa kuphela kubo abahamba phambili futhi abafanele isethulo sesici lapha.
I-Microgaming Casino Software - Omunye wabahlinzeki be-software bokuqala embonini, iMicrogaming yethule iGaming Club ngo-1994 njengelayisensi yayo yokuqala eyayenza yaba yikhasino yokuqala online eThailand nasemhlabeni jikelele. IMicrogaming ayiyona nje eyodwa yamapulatifomu e-inthanethi okuqala, kepha bayaziqhenya ngeqiniso lokuthi bahlala benobuchule eminyakeni edlule. Bahlala bekhulula imidlalo emisha ye-inthanethi emnandi, imikhiqizo yabadlali abaningi njengemiqhudelwano yezintambo ezaziwa njenge-slots freerolls kanye nemincintiswano ye-blackjack. IMicrogaming inemidlalo ecishe ibe ngu-500 kuphothifoliyo yayo ongayidlala kwisoftware yokulanda yekhasino noma kungakhishwa, inguqulo esheshayo ye-flash. Ngaphezu kwalokho, amakhasino akwaMicrogaming abe ngawokuqala ukunika okuthandwa ngokukhethekile kubadlali be-casino base-Thailand ngokwethula inketho ye-THB esikhundleni sokubheja nge-USD. Noma iyiphi ikhasino ye-Microgaming ingenye yezincomo eziphakeme kakhulu esizeni sethu kodwa, thina ngokwethu sincoma iJackpot City, iRoyal Vegas, Zonke Izikhala kanye neGo Wild yizo ezihamba phambili eThailand.
I-Playtech Casino Software - Omunye wabathuthukisi abasha be-software onconywe lapha, i-Playtech inika amandla imidlalo ngemidwebo emnandi kanye nokukhethwa okumangazayo kwemidlalo yama-movie e-Hollywood. Manje inkampani ehweba esidlangalaleni e-UK, i-Playtech yasungulwa ngo-2000 futhi manje banemidlalo eyeqile kwengama-300 ongayilanda mahhala. Abadlali abane-Mac noma abafuni ukulanda noma iyiphi isoftware basengadlala uhlu oluhehayo lwemidlalo. I-Playtech inikeza imidlalo emikhulu yasekhasino enabathengisi ababukhoma bemidlalo ye-blackjack ebukhoma, i-roulette ebukhoma, ne-baccarat yomthengisi bukhoma. Futhi banemidlalo yokuphathelene efana neBlackjack switchch ne-3D Roulette okuyimidlalo yabo ethandwa kakhulu. Ama-opharetha aphambili we-Playtech afaka phakathi iCasino Tropez, iWinner Casino, iBet365 neWindows Casino.
I-Net Entertainment (Net Ent) I-Casino Software - Okujwayele ukubizwa ngesifinyezo sayo i-NetEnt, iNet Entertainment ngomunye umhlinzeki othengiswa esidlangalaleni futhi yenze njalo kwi-NASDAQ yaseSweden. Bayizinkampani ezivela eSweden ezigembula futhi zakha imidlalo yazo zisebenzisa i-applet yeJava. Lokhu kubakhokhele futhi manje sebenemidlalo ethokozisa kakhulu futhi exhumana ongayithola ekhasino laseThailand online. Abathuthukisi be-software be-NetEnt yekhasino benze imidlalo emangalisayo ye-3D efana neBoom Brothers, iWonderland ka-Alice, iGonzo's Quest, neRobin Hood. Abadlali bekhasino baseThailand kungenzeka bangajwayelani nemikhiqizo yesoftware yeNetEnt, kepha baphakathi kokuhamba phambili emhlabeni. Ama-opharetha amaningi akhomba ikhasimende laseYurophu, kepha iMybet, iCasino Luck futhi ikakhulukazi iTropezia Palace ibhekele umphakathi wamazwe omhlaba.
I-Real Time Gaming (RTG) Isoftware Yekhasino - I-RealTime Gaming (RTG) ingomunye wabahlinzeki besoftware abadumile futhi basungulwa emuva ngonyaka we-1998. Bafudukela eCosta Rica emuva ngo-2007 ngenkathi iHastings International ibathenga. Imakethe yaseMelika iyona ebabhekele kakhulu, kepha imidlalo ye-RTG isengadlalwa i-THB ekukhetheni opharetha beReal Time Gaming okuyinzuzo ecacile kubadlali baseThailand. Abantu abaningi abadlala ekhasino online yaseThai bafuna umkhiqizo okulula ukuwusebenzisa nokuwuqonda. Le software yaziwa ngabo bobabili. I-RTG yaziwa ngokukhetha kwabo okuqinile kwamageyimu we-video poker nemiqhudelwano ye-poker ye-inthanethi. Inemidlalo engaba ngu-200 engadlalwa mahhala noma ngemali yangempela futhi ingalandwa noma ungayidlala ngaphandle kokulanda noma iyiphi isoftware. Yize kunethoni labaqhubi beRealTime Gaming, iBodog Casino neWinpalace abaholi bezimakethe abaphezulu abafaka lokho.
Ukugembula oku-intanethi eThailand
Eminyakeni engu-5-10 edlule ayikho enye imboni ye-Intanethi eye yabona ukukhula okukhulu njengemboni yekhasino ye-Intanethi. Ngawo-1990, le mboni ayizange iqale ngokuqhuma ngokushesha, kodwa i-buzz yakhula futhi abantu abaningi baqala ukubheka izinjini ezifana ne-Google zekhasino eliku-inthanethi iThailand. Kusukela lapho, imboni ikhule kakhulu kunalokho obekulindelekile: imidlalo yasekhasino manje ifaka ukugqwayiza okungakholeki kwe-3D kanye nezindikimba nezinhlamvu zamafilimu aseHollywood; ukuthengiselana kwezezimali kuphephe kakhulu futhi izinkokhelo zamaholo abadlali baseThai ziyashesha; ama-ejensi athembekile wamazwe omhlaba anjengePricewaterhouseCoopers asetshenziselwa ukuqinisekisa ukugembula okulungile nemikhuba yokubalwa kwezimali esemthethweni Sekukonke, imboni yokugembula online eThailand isuka kude futhi manje isingezinye zezikhathi zokuzijabulisa nezithandwa kakhulu kwi-Intanethi. Noma kunjalo, kunabantu abangathembekile kunoma iyiphi imboni, ikakhulukazi kwi-intanethi, okungcolisa idumela labanye. Ukugwema izingibe ezivamile, sinikeza izinkomba ezimbalwa eziwusizo kuwe ukuthola indawo esemthethweni yokugembula online:
Bheka izitifiketi zesitifiketi ezivela kubantu abathathu abahloniphekile njenge-eCogra, iTech Labs kanye ne-TST Systems. Izimpawu zivame ukuhanjiswa phansi kwekhasi eliyisiqalo.
Qiniseka ukuthi isevisi yamakhasimende iyatholakala i-24 / 7. AmaKhasiyinti abonakalayo atholakale ku-inthanethi 24 / 7, ngakho kufanele asekele futhi yonke imisebenzi ehloniphekile ingakwazi ukuqasha abasebenzi ngehora.
Thola imigomo nemibandela eshiwo ngokucacile yokwenyuswa. Lawa ngamabhizinisi angempela futhi wonke amabhizinisi adinga ukuzivikela ekukhwabaniseni - kulokhu, ukukhwabanisa kwabadlali. Uma ingubo ifuna ukukukhwabanisa, ngeke bakhathazeke ngokukhawulela isikweletu sephromoshini. Kwezinye izimo, uma ibhonasi yekhasino yamahhala yinhle kakhulu ukuthi ingaba yiqiniso - kunjalo.
Kunezinzuzo eziningi lapho ubheka izikhuthazi zemali lapho udlala ekhasino yase-Thai eku-inthanethi enjengebhonasi yokubhalisa yamahhala kanye nethuba lokudlala nokunqoba ngokunethezeka kwekhaya lakho. Vele uqiniseke ukuthi ukhetha okulungile! Ngokudlala ikhasino online, ungasebenzisa amasu wokudlala ukwandisa amathuba akho wokuwina. Njengoba zonke lezi zinto zihlanganisiwe, akumangalisi ukuthi ukugembula oku-inthanethi eThailand kuqhume eminyakeni eyi-10-15 edlule - noma umnotho wehla futhi abantu abancane bevakashela amakhasino asemhlabeni.
0.1 Uhlu lwe-10 ephezulu ye-Thailand Online Casino Sites
2.1 Ulwazi olungaphezulu kwi-Industry Online Yezokugembula yase-Thai
2.2 Abahlinzeki be-Casino abaphezulu be-Thais
2.3 Ukugembula oku-intanethi eThailand